2021.11.26 20:52 Ped-yuko Soon
2021.11.26 20:52 QuantP1 17M Missouri, looking for holiday friends and beyond
2021.11.26 20:52 TheSouthWifiIsSlow Newblood has restocked everything on their store cuz it's black friday, so yall can buy this before other degenerates do it before you (http://Waste.Money)
submitted by TheSouthWifiIsSlow to Ultrakill [link] [comments]
2021.11.26 20:52 sea-life_sexer (HELP) want to stream but need tech help with internet speed and similad
So basically I want to start streaming and I’ve tried multiple times in the past using different softwares and it always buffers for like 30 secs atatime on 144p and like 5fps. My streams just don’t work. At first I thought the issue was my specs, despite research saying they’re fine for streaming (GTX 1650, i5-9400F) I think I’ve finally found the issue, my internet. I ran an internet speed test. When I’m home alone with no one using the internet I get 15-18mbps download speed and 0.5-0.8mbps upload speed. Is this the issue? If so what are some ways to improve? I havea100meter standard Ethernet cable that stretch’s across my house from my modem to my pc. All possibilities help, I want to know all the things I can do to improve this or maybe help regarding how to make my streams work properly. Thanks for your time <3
submitted by sea-life_sexer to youtubegaming [link] [comments]
2021.11.26 20:52 Craze369 WB Moltres on me 2209 7132 4151
submitted by Craze369 to PokemonGoRaids [link] [comments]
2021.11.26 20:52 rkarl7777 Schwinn IC4 Black Friday sales all over the place
Amazon has the Schwinn IC4 for $799.00
Target has it for $799.00
BestBuy has it for $799.99
submitted by rkarl7777 to schwinn [link] [comments]
2021.11.26 20:52 npccombines Anyone know how to farm items from Corn Farm?
Does anyone know what the best effective strategy is for destroying the barrier?
I really want to level up my units, and I'm havingahard time coming across bread to make into blood packs. Any strategies or ideas?
2021.11.26 20:52 Remote_Savings_5321 Delivery drivers of reddit, what do you want us to do when we're outside and you get here?
submitted by Remote_Savings_5321 to AskReddit [link] [comments]
2021.11.26 20:52 Kriminalkaidou his eyes r literally gorgeous :0 /p
submitted by Kriminalkaidou to Ranboo [link] [comments]
2021.11.26 20:52 NFT_DigitalArt 🎰NFT GIVEAWAY 🎁 UPVOTE ⬆️ DROP WALLET ADDRESS! BBRC POAPS! ♦️ READ COMMENTS! [X-post from /r/opensea]
2021.11.26 20:52 Luv-Avery 21F looking for my princess💕
Hi im totally new to reddit sorry if im doing this wrong! My names avery im 21 and bi. I literally cant find any girls near me…. So im here💕 I luv girly girls (lipstick lesbians) probably because im super girly. Tho, I care more about what’s inside! I luv reading and drawing. Im literally always daydreaming lol✨💕 I just want to find my princess- message me!
submitted by Luv-Avery to LesbianActually [link] [comments]
2021.11.26 20:52 FriedP0rg I have done it. No lightsabers (blasters/grenades only). No force powers. Minimal follower force powers. Malak defeated.
submitted by FriedP0rg to kotor [link] [comments]
2021.11.26 20:52 TohkaTron98 Best girl eating
2021.11.26 20:52 mmmmyyyyyyyyy You Are Die
submitted by mmmmyyyyyyyyy to Bossfight [link] [comments]
2021.11.26 20:52 gggggrrrrrrrrr What's up with the weird noises from Abigail?
So does anyone know the origin of the weird giggles and other noises that Abigail makes? It's notasound she makes in Don't Starve, so I'm wondering if it'sareference to something else, or just an entirely random choice.
submitted by gggggrrrrrrrrr to Terraria [link] [comments]
2021.11.26 20:52 MaungMin3916 Music, Photos, Movie and others data's on Phones and Computers
⁉ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာတွေပေါ်မှာ သီချင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်ရှင် နဲ့ အခြား Data တွေဟာ ဘယ်လိုရပ်တည်နေသလဲ⁉
မလန့်သွား ပါနဲ့နော်။ နည်းနည်းလေး စိတ်ဝင်စားကြည့်လိုက်ရင် အဖြေက ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲဆိုတာ မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီ အကြောင်းအရာလေးတွေကို မိတ်ဆွေတို့ နားလည်ရလွယ်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထိတွေ့နေကြ အရာလေးတွေနဲ့ ဥပမာပေး ရှင်းပြသွားချင်ပါတယ်။ နည်းပညာ အသုံးအနှုန်းတွေ ရှောင်မယ်။ လိုအပ်တာကို ဘာသာပြန်ပြီးပြောပြမယ်။ Bytes, Pixels, Frames Per Second, Syntax, Bad Sectors, NAND Gates, OR Gates, Tharabha Gate ဘာတွေမှန်းလည်း မသိပါဘူး😵။ ဒါမျိုးတွေကိုတော့ နောက်ထပ် Level တစ်ခုကြမှ ဆက်ပြီး လေ့လာကြည့်လိုက်ပါနော်။ ကိုယ်တိုင် ဘာမှန်းမသိတာကို အဲ့လိုရောချရတယ်ဗျ။ 😁😁
Data တွေ ဘယ်လို ရပ်တည်နေသလဲ ဆိုတာမပြောခင်၊ အရင်ဆုံး ပြောရမှာလေး တစ်ခုတော့ ကျန်ရှိနေသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ကြားဖူးနေကြ စကားလေး တစ်ခွန်း......
🗨ကွန်ပြူတာက 1 နဲ့0ကိုပဲ နားလည်တာ🗨
ဟုတ်ကဲ့။ အဲ့ဒီ သူနားလည်တာလေးကို နည်းနည်းရှင်းပေးမှ ရမှာမို့လို့ပါ။ 👇အောက်မှာ စကီအလန်းလေးပုံ ပါတယ်နော်။ 👱‍♀️👱‍♀️
1 နဲ့0ကိုပဲနားလည်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဒီတိုင်းလေးပဲ နားလည်တာ မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ 1၊0အစီအစဉ်လိုက်ကြီး ဖြစ်နေမှ သူကသိတာ။ ဆိုလိုတာက
HI ဆိုတဲ့စာကို သူနားလည်တဲ့ပုံစံ > 01001000 01001001
အဲ့ဒီလို 1 နဲ့0အစီအစဉ်လိုက်ပါနေတာကို ဒစ်ဂျစ်တယ် သင်္ကေတ၊ Binary Code၊ ကွန်ပြူတာဘာသာစကား အစရှိသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ 1 နဲ့0တွေပဲပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် HI ဆိုတာကို လူတွေနားလည်အောင် ဘာသာပြန်ပြီး သူပြန်ပြပေးပါတယ်။
သူသိတဲ့ အစိမ်းရောင်က ဒီလိုမျိုး> 00000000 11111111 00000000
သူသိတဲ့ စကီအလန်းလေးး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဆိုတာ >
01010011 01101111 01100110 01110100 01110111 01100001 01110010 01100101 00100000 11100001 10000000 10010000 11100001 10000000 10111101 11100001 10000000 10110001 11100001 10000000 10000000 11100001 10000000 .....
ဟုတ်တယ်ဗျ အဲ့ဒါကြီးကိုပဲ သူက Feel နေတာ။ တကယ်တော့ သူသိတာ အရောင်တွေရဲ့ တန်ဖိုးကိုပဲ သိတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ သူ့ဘာသာစကားကနေပြီး ကျွန်တော်တို့ မြင်နိုင်တဲ့ အရောင်တွေနဲ့ ပြန်ပြပေးတာပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ သုံးနေတဲ့ Camera 360 တွေ၊ Photo Editor တွေက ကျွန်တော်တို့ ပုံလေးတွေ လှအောင်ဆိုပြီး လုပ်ပေးနေနိုင်တာကတော့ လူလုပ် အသိဉာဏ်တွေမို့လို့ပါ။ ဒီအကြောင်းလေးကတော့ နောက်မှအေးဆေးပြောပြမယ်နော်။
❔အဲ့တော့ အမြဲတမ်း 1 နဲ့0ဖြစ်နေမှ နားလည်တာလား❔
နံပါတ် 1 နဲ့0ကြီး ဖြစ်နေရမယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ 1 နဲ့0ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ကိုက်ညီရင်လည်း သူသိပါတယ်။ ရှုပ်ကုန်ပြီလား။ နည်းနည်းလောက် ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်။
1 ကို တစ်နည်းအားဖြင့် ဖွင့်တယ်၊ မြင်ရတယ်၊ တည်ရှိနေတယ်၊ မှန်တယ်၊ အဖိုဓာတ်ရှိတယ် စသည့် အရာတွေဖြစ်နေလည်း 1 ဆိုပြီး ကွန်ပြူတာက သိနိုင်ပါတယ်။
0 ကို ကြတော့ ပိတ်တယ်၊ ပျောက်တယ်၊ ပျက်တယ်၊ အမဓာတ်ရှိတယ်၊ မှားတယ် စသည်ဖြင့်ပေါနော်။ အဲ့ဒါတွေကိုတော့0ဆိုပြီး သိပါတယ်။
ဟုတ်ပြီလေ။ သိတော့ ဘာဆက်ဖြစ်တုန်း။
အဲ့လို သူနားလည်တဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်တော့မှ သူ့ရဲ့ မှက်ဉာဏ်ထဲ သိမ်းထားလို့ရပြီပေါ့။ သိမ်းထားနိုင်သလို လိုတဲ့အချိန်လည်း ထုတ်ဖတ်နိုင်တာပေါ့။
အဲ့ဒီကနေစပြီး ကျွန်တော်တို့ Data တွေက 1 နဲ့0တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတော့တာပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်အလက်တွေ ဖြစ်သွားတယ် ဆိုပါတော့။
❔ဒါဆိုရင် 1 နဲ့0တွေဖြစ်နေတဲ့ Data တွေကို ကွန်ပြူတာက ဘယ်လို ရပ်တည်ခွင့်ပေးလိုက်တာလဲ❔
အဖြေက သိမ်းဆည်းတဲ့ နေရာပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းနည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။
1️⃣Magnetic Storage > Tape / Hard Disk Drive / Floppy Disk 2️⃣Optical Storage > CD/VCD/DVD 3️⃣Flash Storage > SD Card / SSD / Memory Stick
ကြားဖူးပြီးသားပါ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် သူတို့တွေ ဘယ်လိုသိမ်းသွားလည်းဆိုတာ ပုံလေးတွေမှာ ဝင်ဖတ်ပေးပါဦးနော်။
submitted by MaungMin3916 to TechfMyanmar [link] [comments]
2021.11.26 20:52 MugShots LVMPD Traffic Alert
LVMPD Traffic Alert ACCIDENT (WITH INJURY) SPRING MOUNTAIN RD / WYNN RD 11/26/2021 3:34:44 PM incident #LLV211100110365
2021.11.26 20:52 gnipbtw Meme for y'all :D
submitted by gnipbtw to rocketleaguesideswipe [link] [comments]
2021.11.26 20:52 Daheji My greatest treasure Bennett
submitted by Daheji to Genshin_Impact [link] [comments]
2021.11.26 20:52 Smeeizme Item Idea - Those sticky elastic cheap plastic hands that you slap stuff with
How fucking perfect for this game would that be? Luke use it asaflail inamix of the finger’s physics and bertran’s head movement
submitted by Smeeizme to bindingofisaac [link] [comments]
2021.11.26 20:52 MadRussianScientist Mishka, almost 1 year old 😻
submitted by MadRussianScientist to britishshorthair [link] [comments]
2021.11.26 20:52 Yosho2k What's going on with these antiwork receipts?
Redditors on antiwork are posting images of receipts showing antiwork manifestos generated from seemingly random locations.
How did so many machines seemingly get modified to produce these scripts?
I'maregular browser on the sub and I don't recall seeing anyone organizing this activity.
submitted by Yosho2k to OutOfTheLoop [link] [comments]
2021.11.26 20:52 Koo_Bird Trade Offer Received: Miles Sanders for his Saquon Barkley
Am I overthinking this? Saquon isatop RB when healthy, but Miles Sanders does haveasoft schedule ROS. My only real concern is Saquon’s health
submitted by Koo_Bird to Fantasy_Football [link] [comments]
2021.11.26 20:52 SplatteredCow69 Debate
I’manew skrillex fan. I’m currently debating which of these isabetter song. I want your guys opinion on which song is better.
submitted by SplatteredCow69 to skrillex [link] [comments]
2021.11.26 20:52 NFT_DigitalArt 🎁Join giveaway NFT from collection of Pixelated Corgi! 👇See comments! [X-post from /r/opensea]